Yan Aung: February 2010
စွန်တစ်ကောင်ကို ကောင်းကင်ပေါ်လွှတ်တင်ရတာ ငှက်ပျောသီး အခွံနွှာစားရသလောက်တော့ မလွယ်လှပါဘူး.
အထူးသဖြင့် လေငြိမ်နေတဲ့ညနေခင်းမျိုး (သို့မဟုတ်) ကိုယ်စွန်လွှတ်တင်မယ့်နေရာက တိုက်မြင့်ကြီးနားမှာ ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးဆို ကိုယ့်စွန်လေထဲရောက်အောင်၊ လေကြောင်းမိအောင် လွှတ်တင်ရတာ တော်တော်လေး ပညာသားပါလာပါတယ်. ဒီနေရာမှာ ဝေါဟာရအသစ်လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်. အဲဒါကတော့ "စွန်တောက်ခြင်း" ပါပဲ.
စွန်တောက်တာတောင် ပုံစံထပ်ကွဲပါသေးတယ်. စွန်လွှတ်တင်တဲ့အခါမှာ လုပ်တဲ့ စွန်တောက်ခြင်းနဲ့ ကိုယ့်စွန်တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ ငြိနေတဲ့အခါမျိုးမှာ လွတ်အောင်လုပ်တဲ့ စွန်တောက်ခြင်းဆိုပြီးတော့ပါ. အဲ. ကျွန်တော် ဒါတွေပြောနေလို့ တကယ့် စွန်ကျောင်းတော်ကြီးများ ရှိနေလားဆိုပြီး တွေးမနေနဲ့ဦးနော်. ဟတ်ဟတ်. ကျွန်တော်တတ်ခဲ့သိခဲ့ဖူးတာလေးတွေကို သိသလို တတ်သလို ပြန်ရေးပြနေတာပဲ ရှိတာပါ. ကဲဗျာ. ဆက်မယ်နော်.
Posted By Yan 8 Comments
ဟင်းးးးးး ဟင်းးးး ဟင်းးးး
အဲဒီ့ခံစားချက်တွေနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ တနင်္ဂနွေဟာ အနားမရ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်...
မနက်အစော ၅း၄၅ လောက်ကြီး "ဒုန်းးး ဒုန်းးး ဒုန်းး" ဆိုပြီး အခန်းတံခါးကို လာခေါက်တယ်...
စိတ်ထဲမှာ ထောင်းခနဲဖြစ်သွားတယ်. ဘယ်သူလဲကွာပေါ့...
ကုတင်ပေါ်က လွှားခနဲ ခုန်ဆင်းပြီး တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့မှ...
Posted By Yan 12 Comments